आखिर किन हाम्रो शरीरमा एक्कासी काँडा उम्रिने गर्छ ? जान्नुहोस्
मुख्य पृष्ठHealth Tips स्वास्थ्य जीवनशैलीआखिर किन हाम्रो शरीरमा एक्कासी काँडा उम्रिने गर्छ ? जान्नुहोस्
हाम्रो शरीरले तत्कालै केहि भएको खण्डमा हाम्रो शरीरमा विभिन्न हर्मोन उत्पन्न हुनुका साथै उक्त भावनासंग लड्नको लागि शरीरले तुरुन्तै प्रतिक्रिया देखाउने गर्छ । हामीलाई जाडोको समयमा चिसो होस तर्सेको बेला, गीत सुन्ने गर्दा, फिल्म हेर्दा, दुखि भएको हुदा वा केहि कुराले हम्म्रो मन निक्कै छोएको बेलामा होस् हाम्रो शरीरको छालामा ससाना विमिराहरु उत्पन्न हुन्छ ।
हाम्रो शरीरमा धेरै रौँ नभएको कारणले हामी सजिलै देख्न सक्छौं र हामी यसलाई काँडा उठेको भन्ने गर्छौं । यो प्रक्रिया सबैलाई हुने गर्छ तर, किन र के का लागि भनेर धेरै कमलाई मात्र थाहा हुन्छ । यस्तो काँडा मानिसमा मात्रै नभएर जनावरमा पनि देखिने गरिन्छ ।
तर, हाम्रो शरीरको तुलनामा उनीहरुको शरीरमा धेरै रौँहरु हुने गर्छ जसकारणले हामी उनीहरुको शरीरमा काँडा उम्रेको देख्न सक्दैनौ । जनावरहरुले जव आफ्नो वरीपरि खतराको महसुस गर्न थालछन् उनीहरुले तत्कालै आफ्नो शरीरको काँडा उठाएर आफ्ना दुस्मनमा डर पैदा गराउने प्रयास गर्ने गर्छन् ।
जनावरहरुमा काँडा उम्रादा रौँको फेदमा रहेको हावाको तहले शरीर भित्रको तातोपन बाहिर जान नदिई शरीरलाई न्यानो राख्न मद्दत गर्छ । तर, मानिसमा जनावरमा जस्तो बाक्लो रौ नभएको कारणले मान्छेमा काँडा उम्रादा त्यस्तो केहि पनि हुदैन । जब मानिसमा एक्कासी चिसो, डर, खुशी,आश्चर्य, तनाव, उत्साहित वा तर्सेको बेलामा शरीरमा काँडा उत्पन्न हुन थाल्छ ।
यस विषयमा गरिएको विविन्न अनुसन्धानका अनुसार जब मानिसको शरीरलाई चिसो वा जाडो लागेमा वा मान्छेको मनमा एक्कासी डर, खुशी वा विभिन्न प्रकारको भावनाहरु पैदा हुन्छ शरीर भित्र रहेको एड्रिनालिन ग्रन्थीबाट एड्रिनालिन नामक हर्मोन उत्पन्न हुने गर्छ । उक्त हर्मोनले हाम्रो रौँको फेदमा रहेको स साना मांसपेशीलाई खुम्च्याई दिने काम गर्छ ।
यसरी हाम्रो शरीरको मासु खुम्चिदा शरीरमा भएको सानो सानो रौँको फेदका छालाको तन्तुहरु आफै ठाडो र काँडा जस्तो तरिकाले माथि उठ्ने गर्छ । त्यसैलाई नै हामीले यो प्रक्रियालाई काँडा उठेको वा उम्रेको भन्ने गर्छौ । यो सबै मानिसहरुमा हुने सामान्य प्रक्रिया हो । उक्त भावनाहरु हराएर जाँदा वा शरीरलाई ठिक्कको तापक्रम हुने रौँहरु आफ्नै ठाउँमा फर्किने गर्छ र काँडाहरु बसेर हाम्रो शरीर फेरी सामान्य हुने गर्छ ।
काँडा उठ्ने व्यक्तिहरु शारीरिक तथा मानसिक रुपले स्वास्थ्य हुने पाइएको छ । उनीहरु रचनात्मक पनि हुने गर्छन् । कसैकसैमा भने काँडा उम्रिनु लामो समय सम्म स्थायी रहने गर्छ । तर, यसले हाम्रो शरीरमा कुनै प्रकारको हानी भने गर्दैन ।